के हो यस्तो एउटा केराको मूल्य एक लाख रे ? - Everest Dainik - News from Nepal
के हो यस्तो एउटा केराको मूल्य एक लाख रे ?
५ रुपैयाँ, १० रुपैयाँ वा बढीमा १५ रुपैयाँ । तर, तपाईंले झण्डै एक लाख ४० हजार रुपैयाँ पर्ने केरा देख्नुभएको छ ? पक्कै छैन होला । यदि देखिहाले पनि पत्याउनु हुँदैन ।
यस्तै भएको छ यूकेको नटिङघमकी एक महिलालाई । बबी गोर्डोन नाम भएकी ती महिलाले एक सपिङ सेन्टरबाट अनलाइनमार्फत् केरा अर्डर गरिन् । त्यतिबेला केराको मूल्य एक सय पाउण्ड भन्दा कम थियो ।
याे पनि पढ्नुस हावाहुरीले करोडौँको केराखेती नष्ट
जब उनको घरमा केरा डेलिभरी भयो, बिलमा ९३०.११ पाउन्ड उल्लेख थियो । यसलाई नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्दा झण्डै एक लाख ४० हजार हुन्छ ।
यति धेरै मूल्यको बिल देखेर ति महिला चकित भइन् । उनले चर्को मूल्य लिइएको भन्दै अप्रिल १७ तारिखमा आफ्नो कम्प्लेन ट्विटरमार्फत् सार्वजनिक गरिन् ।
याे पनि पढ्नुस मध्यरातमा ३ हजार केराका बोट फाँड्ने जेल चलान !
बीबीसीको रिपोर्टका अनुसार, उनको क्रेडिट कार्डबाट पेमेन्ट रोकिएको छ । कम्पनीका प्रवक्ताले प्रिन्ट मिस्टेक भएको भन्दै माफी मागेका छन् ।
यसअघि गत फेब्रुअरी महिनाको अन्तिमतिर पनि एक व्यक्तिले मोबाइल फोन अर्डर गर्दा घरमा साबुन डेलिभरी भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
ट्याग्स: banana, one lakh